Iinkonzo -Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Ukukhuselwa kunye nokuVeliswa kuLawulo lweProjekthi yeNdlu
U-Yu Xin Wright ubonelela ngoluhlu lonke lweprototyping kunye neenkonzo zokuvelisa. Isigaba ngasinye senkqubo sigqityiwe phantsi kophahla olunye. Iinjineli zethu zikulungele ukunceda kuyilo, ukhetho lwezixhobo, kunye nemizobo yakho ye-CAD. Onke amasebe emveliso axhumene nonxibelelwano olungcono, ukhuseleko kunye nokusebenza ngokufanelekileyo. Kungakhathaliseki ubungakanani beprojekthi, wonke umthengi unesisindo esipheleleyo seenkonzo zethu ngasemva kwabo.
Ukuhlala entlokweni yamandla okuvelisa e-CNC, sisebenzisa oomatshini abaphambili kakhulu baxhotyiswe ngesixhobo esitsha sokuxhasa. Iinjineli zethu zihlala ziphambili kwinkqubela phambili yeshishini kunye nophuhliso, okukhokelela kubuchule bokuvelisa obungenakuthelekiswa nanto. Sebenzisa ingqokelela yethu ye-3-, 4-, kunye no-5-axis oomatshini be-CNC esinokuthi sikhonze uninzi lwezicelo kusetyenziswa isinyithi, iialloys kunye neeplastiki. Yiba neentsimbi ezichanekileyo, ezigqityiweyo kwiintsuku nje ezi-2-5.
Iinkonzo zokuprinta ze3D
Ukuprintwa kwe-3D luphuhliso lwamva nje kwindalo yohlobo lweprototype. Usebenzisa ushicilelo lwe-SLA kunye ne-SLS, u-Yu Xin Wright Tech unokuvelisa ngokuchanekileyo, okuncinci, ukusebenza ngokubonisa uyilo lwakho kwiiyure ezingama-24-48! Iiporotypes ze-3D zikulungele ukumisela ukusebenza kwemveliso, ukucacisa umxholo, okanye ukuchukumisa umtyali mali.
Isinyithi sephepha somelele, sibhetyebhetye kwaye sithandwa kakhulu. Isinyithi samaphepha siyamelana nokubola kunye nobushushu. Izinyithi ezininzi kubandakanya i-tin, i-stainless steel, i-nickel, ithusi, kunye ne-aluminium inokusetyenziswa kwiphepha lesinyithi. Iphepha lesinyithi livumela uyilo kunye nokuveliswa kweemilo ezintsonkothileyo kunye noyilo, ukubeka iindawo ezenziwe ngetsimbi yentsimbi kumashishini aphambili kwihlabathi liphela.
Velisa amawaka eeplastiki ezifanayo kunye nezintsonkothileyo zeplastikhi ngokukhawuleza ngeenkonzo zeplastikhi zokubumba ngu-Yu Xin Wright. Icandelo elenziwe ngeplastiki linemichiza, ibhayoloji, kunye nokumelana nokusingqongileyo okwenza ukuba ziluncedo kububanzi obukhulu beshishini. Inaliti yeplastiki yokubumba isebenza ngeeplastikhi ezininzi ezahlukeneyo, nganye inokuthi igqitywe ngeziphumo ezahlukeneyo ngaphakathi endlwini. Singazenza izixhobo ze-aluminium prototype ezintsonkothileyo kwiintsuku ezingama-5-7. Izixhobo zokuvelisa zinokuveliswa kwiiveki ezi-2-4 kusetyenziswa i-P20 yentsimbi.
Iifom zokuphosa izinto zentsimbi kwiimilo ezenziwe kwiinkcukacha zakho. I-Dies yenziwa kwindawo yethu ye-CNC, emva koko isetyenziselwa ukwenza ii-casting ezifanayo zesinyithi. Isamente iyaphola kwaye ihlolwe, kwaye uninzi lweenkonzo zokugqibezela zinokusetyenziselwa izinto eziluncedo kunye nezithambiso. Sinokuvelisa izixhobo ezilahliweyo ze-Die kwiiveki ezi-2-4 kuphela sisebenzisa isinyithi se-H13. Sikwabonelela ngovavanyo oluvuzayo, ukumitha, i-Anodizing, Ukwaleka komgubo, ukufakwa, ukumiliselwa kwesibini kunye nokucoca.
Abicah ngerabha Ukubumbela
Izinto ezenziwe kusetyenziswa irabha yesilicone ziyamelana nokubola, iikhemikhali, azichaphazeleki ngumbane, kwaye zihlala ixesha elide phantsi kweemeko ezinzima. Ngapha koko, iLiquid Silicone Rubber (i-LSR) ikwimfuno ephezulu kangako kuba isebenzise phantse kuwo onke amashishini kwihlabathi liphela. I-LSR ifumaneka ngemibala emininzi, ingasetyenziselwa ukushicilelwa kwe-3D, kwaye inokusetyenziselwa ekubumbeni ngenaliti ukwenza amawaka eeyunithi.
Sinesebe eligqibezela ngaphakathi endlwini elinakho ukufaka inani elingenakuthelekiswa nanto lokuthambisa kunye nokugqiba kwiiprojekthi zenu ezigqityiweyo. Iinkonzo zokugqiba zibonelela ngokubonakalayo okwandayo kunye nokuqina kweeprototypes, imveliso encinci yebatch, kunye nemveliso yevolumu ephantsi. Ukulungelelanisa umbala othile, sisebenzisa inkqubo yePatone yokuthelekisa umbala ngokuchaneka okugqithileyo kunye nonxibelelwano olungenamthungo.